ईङ्गल्याण्ड सँग अफगानी बलर निरिह ! ईङ्गल्याण्डद्रारा कीर्तिमानी लक्ष्य प्रस्तुत – onlinekhelkhabar.com
ईङ्गल्याण्ड सँग अफगानी बलर निरिह ! ईङ्गल्याण्डद्रारा कीर्तिमानी लक्ष्य प्रस्तुत
असार ३ , अनलाईन खेलखबर ।। कप्तान इयोन मॉर्गन, जो रुट र जोनी बेयरस्टोको उत्कृष्ट ब्याटिंङ्गको मद्दतमा १२ औँ सस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकपको आयोजक तथा उपाधिको दाबेदार ईङ्गल्याण्डले अफगानिस्तान सामु बिशाल चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।
अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टरमा जारी खेलमा ईङ्गल्याण्डले टस जितेर सुरुमा ब्याटिंङ्ग गर्दै निर्धारित ५० ओवर पुरै खेल्दै ६ विकेटको क्षतिमा ३ सय ९७ रन बनाएको छ । जुन जारी विश्वकपमा कुनै टिमले बनाएको हाल सम्मकै ठुलो स्कोर हो । यसअघि ईङ्गल्याण्डले नै बंगलादेश बिरुद्द ३८६ रन बनाएको थियो ।
ईङ्गल्याण्डको शानदार ब्याटिंङ्गमा नायक बनेका कप्तान ईयोन मोर्गनले सर्बाधिक धेरै रन बनाउने क्रममा १४८ रन एक्लैले बनाए । आक्रामक ब्याटिंङ्ग गरेका उनले ७१ बलमा ४ चौका र १७ छक्काको मद्दतमा उनले उक्त रन बनाए । यस्तै उनलाई साथ दिएका जो रुटले पनि ८८ रनको योगदान गरे ।
८२ बलको सामना गर्दै ५ चौका र १ छक्काको मद्दतमा उनले उक्त रन बनाए । टिमलाई ठुलो लक्ष्य सम्म पुर्याउन ठुलो भूमिका निर्बाह गरेका यी दुई खेलाडी विच तेस्रो विकेटका लागि १८९ रनको साझेदारी हुन् पुगेको थियो ।
यसअघि टिमले पहिलो विकेटका रुपमा जेम्स विंसलाई ४४ रनमा गुमाएको थियो । पहिलो विकेटको पतन पछि भने दोस्रो विकेटका लागि भने जोनी बेयरस्टो र जो रुट बिच १२० रनको साझेदारी हुन् पुगेपछि टिमले सुरुवाति अबस्था देखिने राम्रो सुरुवात पाएको थियो ।
ईनिंङ्गको अन्त्यमा मोईन अलिले अविजित रहदै ३१ रन जोडे अरुको भने संतोशजनक प्रदशन हुन् सकेन ।
बलिङ्ग तर्फ अफगानिस्तानका कप्तान गुलबदिन नईव र दउलत जर्दानले समान ३/३ विकेट हात पारे ।
अब इंगल्याण्डले प्रस्तुत गरेको ३ सय ९८ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउदै जवाफी ब्याटिंङ्गमा अफगानिस्तान अबको केहि बेर पछि मैदानमा उत्रिने छ ।
Previous Postकप्तान मोर्गनको विश्वकपमा पहिलो सतक
Next Postअफगानिस्तानलाई ठुलो अन्तरले पराजित गर्दै ईङ्गल्याण्ड अंकतालिकाको शिर्षस्थानमा उक्लियो